Dowlada Kenya oo beenisay inay farogelin ku hayso dalka Soomaaliya - Jowhar Somali news Leader
Home News Dowlada Kenya oo beenisay inay farogelin ku hayso dalka Soomaaliya
Dowlada Kenya oo beenisay inay farogelin ku hayso dalka Soomaaliya
Qoraal ka soo baxay Wasaarada Arrimaha Dibbada dowlada Kenya ayaa lagu beeniyay eedeymo ay dowlada federalka dhowaan u soo jeedisay dowlada Kenya oo ah inay farogelin ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya.
Dowlada Kenya ayaa ku tilmaantay eedeymahaas kuwo been abuur ah oo la doonayo in laga weeciyo horumar la’aanta ka jirta siyaasada dalka Soomaaliya.
“Kenya waxay diidan tahay eedeynta aan sharciga ahayn ee salka iyo baarka lahayn ee kaga timid DFS, sidoo kale waxa ay si cad banaanka ugu istaagtay faragelinta Arrimaha Gudaha “ ayaa ka mid ah qoraalka Wasaaradda Arrimaha dibadda kenya ka soo baxay.
Eedeymaha loo soo jeediyay ayay dowlada Kenya waxa ay ku tilmaantay mid muuqaalkeda lagu xumeynayo lagana leeyahay dano gaar ah.
Danjiraha Soomaaliya wakiilka uga ah Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan (Baalle) ayaa Jimcihii aynu ka soo gudubnay sheegay in dowlada Soomaaliya ay qorsheyneyso in si rasmi ah cabasho ka dhan dowada Kenya u gudbiso golaha ammaanka.
Qoraalka ka soo baxay dowlada Kenya ayaa ku soo beegmay xilli shalay ay dib ugu laabteen magaalada Nairobi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto gobolka Waqooyi Bari kuwaasoo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.